"Torchwood" - umbukiso-legatsha (okungukuthi, spin-off) of the Universe "Doctor Who", abadali ezithinta abalandeli uyajabula yalo msebenzi, enezela inkampani nge "K9" nesithi "Sary Dzheyn Adventures". Nokho, "Torchwood" ihlukile kwabanye ngoba umbukiso ababukeli omdala kakhulu, futhi wokubuka umndeni ifika kuphela inqolobane enkulu. Nokho, lokhu akusho ukwenza kube kubi, ngempela Kunalokho: iye yazuza okwandile udumo sibonga nesakhiwo, futhi umqondisi, umkhiqizi, futhi-ke, waphonsa ngokunethezeka ifaniswe. Uchungechunge oluthi "Torchwood", abadlali ngubani, eqinisweni, kukhona izinto ngenxa yokucabangela lesi sihloko, langena ngempumelelo uhlu the best-sci-fi iphrojekthi ngaleso sikhathi.
Dzhon Barroumen - uCaptain Dzhek Harkness
Indima Captain Jack Harkness - eziphawuleka kakhulu futhi owaziwa emsebenzini wakhe, kudlalwa Dzhona Barroumena. Ngokokuqala ngqá kubonakala kuba "Doctor Who" njengoba uhlamvu ezincane, kodwa "Torchwood" wayevuka omunye izindima eyinhloko. Dzhon Barroumen ngamabomu iqala uhlu lwethu "" Torchwood ": nabalingisi izindima," ngoba, njengoba showman, futhi ubuntu bakhe - umuntu ababengeke basilibale.
UCaptain Dzhek Harkness - ebukekayo, omniseksual onekhono. Sici Its akachazeki - lena, yebo, ukungafi. It ngokucacile samanje ubuholi, yingakho Uyabahola ithimba "Abazingeli ongabazi" (wamahhala kwegama uchungechunge).
Ezinye imikhuba yabo futhi imikhuba Barrowman idluliselwe uhlamvu lwakho. Nokho, kunzima ukuphikisa neqiniso lokuthi kahle ephethwe ke. "Torchwood", ogama abadlali Lifanele amaqhawe abo, izinga ivelele phakathi kwezinye spin-kwezitshalo "doktorovskoy" yonke.
Iv Mayls - Gven Kuper
Iv Mayls futhi uvele "Torchwood" akuyona ngephutha. Wadlala cameo ukubukeka elincane uchungechunge "Doctor Who", nakuba ayengafiki bobuntu bakhe, futhi ukhokho wakhe. It is, isimiso, kuyisici sobuntu yonke-sci-fi, okuyinto sihlanganisa "Doctor" futhi "Torchwood": abadlali aphambana, kunezibonelo eziningana imidlalo eyadlalwa kubo indima "kabili".
Gven Kuper - omunye abalingiswa abasemqoka yochungechunge. She - ayekade eyiphoyisa, ngakho uthola umsebenzi "Torchwood" in the isiqephu sokuqala ngenxa yezimo.
Ngo uGwen futhi samanje izimfanelo ubuholi, kodwa kwalokho, okuningi ebucayi kuka ngamunye "Abazingeli ongabazi."
Ngokuthakazelisayo, indima yabhalwa ngqo Cooper Iv Mayls.
Burn Gorman ukudlalwa "Torchwood" Owen Harper - genius yezokwelapha, ezethemba, futhi ngezinye izikhathi ezikhukhumezayo, zangamabomu, kodwa oyisazi sangempela emkhakheni wabo. UDkt Owen Harper waziphatha ucwaningo, kuba indoda nzima, isifazane futhi ayiboni igunya. Noma kunjalo, iqembu "Abazingeli ongabazi," usho - uchwepheshe Irreplaceable.
UNaoko Mori - Toshiko Sato
Uhlamvu uNaoko Mori - Toshiko Sato - futhi uvele isiqeshana "Doctor Who". Ngaphezu kwalokho, Mori nengxenye okhishiwe Christopher Eccleston (lesishiyagalolunye Doctor), lapho kudlalwa-John Lennon, futhi yena - yakhe ayithandayo Yoko Ono.
Toshiko Sato - Unicode abanamakhono futhi sezibalo. Nanguya ezolile, ezinengqondo, kodwa futhi ngandlela-thile unamahloni ngaso agodliwe. Ngakho, ngokwesibonelo, yinde futhi pretty okuningi in love with Owen Harper, kodwa ukubufihla.
Njenganoma ubani omunye, ithimba Toshiko kwavela ngengozi. Singasho ukuthi Dzhek Spas wakhe, wathenjiswa umsebenzi ngaleso sikhungo Torchwood.
Abalingisi (isithombe - ngenhla), uNaoko Mori futhi Dzhon Barroumen, ngasendleleni, iqiniso liwukuthi futhi abangane abahle, njengawo wonke umuntu, "Abazingeli ongabazi," futhi eside ngaphambi kokuqoshwa spin-off, babephakathi zomculo efanayo West End.
UGareth uDavide-Lloyd - Yanto Dzhons
UGareth uDavide-Lloyd got in "Torchwood" indima Ianto Jones. It kungenziwa ngokuthi Guardian Institute. Lolu chungechunge ngempela kushiwo, yini Ianto. Alternately, liphinde kwakuza isikhonzi, futhi Archivist olungekho emthethweni, naye ushayela imoto, futhi "lihlanza iminonjana" leqembu.
Uhlamvu uGareth uDavide-Lloyd ekuqaleni kubonakala agodliwe kakhulu, kodwa Nguye yedwa okwazi bethi baba nemizwa enamandla, ezifana Lisa yakhe ethandekayo, nabo kwakukhona ngendaba ebuhlungu. Ngaphezu kwalokho, ubuhlobo obuseduze ayenabo inhloko Captain Jack Harkness. ukuthuthukiswa lingabonakala kulo lonke uchungechunge.
Nomdlali wamabhayisikobho waseMelika Ben Makkenzi: Biography, umsebenzi kanye nokuphila siqu